Etu ịtọlite ​​Lighting-atọ maka vidiyo vidiyo gị | Martech Zone
Sunday, October 18, 2020 Tuzdee, Machị 2, 2021 Douglas Karr
Anyị na-eme ụfọdụ vidiyo Facebook Live maka onye ahịa anyị Ihe nkiri Studio na ihunanya ikpo okwu nke otutu vidiyo zuru oke. Otu mpaghara m chọrọ imeziwanye bụ ọkụ anyị. Adị m ntakịrị nke vidiyo ọhụụ mgbe ọ bịara na atụmatụ ndị a, yabụ m ga-aga n'ihu na-emelite ndetu ndị a dabere na nzaghachi na ule. Ana m amụta a ton si ọkachamara gburugburu m dị ka nke ọma - ụfọdụ n'ime nke m na-ekere òkè ebe a! Enwekwara ọtụtụ akụ dị ukwuu n'ịntanetị.
Anyị nwere 16-ụkwụ uko ụlọ na anyị na Studio na incredibly egbuke Ikanam idei mmiri ọkụ na n'uko. Ọ na - eweta onyunyo dị egwu (na - atụ aka)) yabụ m kpọtụrụ onye na - ese foto anyị, AJ nke Ablog sinima, iji mepụta ihe ngwangwa dị ọnụ ala.
AJ kụziiri m banyere ọkụ elekere 3 ma o juru m anya na etu m siri hie ọkụ. Echere m mgbe niile ihe ngwọta kachasị mma ga-abụ ọkụ ọkụ na-agbanye na igwefoto na-atụ aka na onye ọ bụla anyị na-agba ajụjụ ọnụ. Njọ. Nsogbu dị n’ìhè nke dị n’ihu isiokwu ahụ bụ na ọ na-asacha ọdịdị ihu ha kama ịja ha mma.
Kedu ihe ọkụ ọkụ 3-Point?
Ebumnuche nke ọkụ 3 bụ igosipụta ma mesie akụkụ nke isiokwu (s) na vidiyo. Site n’itinye ọkụ n’ụzọ dị mma n’isiokwu a, isi mmalite ọ bụla na-enye ụzọ dị iche iche n’isiokwu ahụ ma mepụta vidiyo nwere ogo, obosara, na omimi… niile ka ị na-ewepụ onyinyo ndị na-adịghị mma.
Uzo isi ato bu uzo eji eme otutu ihe n’enye otutu ihe oku na vidiyo.
Atọ Atọ na 3-Point Lighting Bụ:
Igodo Igodo - nke a bụ isi ọkụ ma na-ahụkarị na aka nri ma ọ bụ aka ekpe nke igwefoto, 45 Celsius site na ya, na-atụ aka 45 Celsius na isiokwu ahụ. Ojiji nke ihe nkesa dị mkpa ma ọ bụrụ na ndò siri ike. Ọ bụrụ na ị nọ n’èzí n’ìhè na-enwu gbaa, ịnwere ike iji anyanwụ dị ka ìhè gị.
Jupụta Ibu - ọkụ juputara na-enwu na isiokwu ahụ ma site n'akụkụ n'akụkụ iji belata onyinyo nke isi igodo mepụtara. A na-agbasasị ya na ihe dị ka ọkara ọkụ nke igodo ahụ. Ọ bụrụ na ọkụ gị na-enwu gbaa karịa ma na-ewepụtakwu onyinyo ọzọ, ịnwere ike iji ngosiputa iji mee ka ọkụ ahụ dị nro - na-atụgharị ọkụ juputara na ngosiputa ma na-egosipụta ọkụ gbasasịrị na isiokwu ahụ.
Nzube Azụ - nke a makwaara dị ka rim, ntutu, ma ọ bụ ubu ọkụ, ọkụ a na-enwu na isiokwu site n'azụ, na-amata ọdịiche dị n'azụ. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-eji ya n’akụkụ iji bulie ntutu isi (nke a maara dị ka kicker). Ọtụtụ ndị na-ese vidio na-eji a monolight nke ahụ na-elekwasị anya ozugbo kama ịgbasa elu.
Jide n'aka ịhapụ obere oge n'agbata isiokwu gị na ndabere ka ndị na-ele gị lekwasị anya na gị karịa gburugburu gị.
Etu esi edobe igwe oku ato
Nke a bụ vidiyo mara mma, na-enye nkọwa maka etu esi edozi ọkụ ọkụ 3.
Na-atụ aro Lighting, Agba okpomọkụ, na Diffusers
Site na onye nlere vidiyo m, azụrụ m obere ihe a na-ebugharị Aputure Amaran Ikanam ọkụ na 3 nke klaasị ntu oyi diffuser. Enwere ike ịgbanye ọkụ ọkụ ozugbo na batrị batrị abụọ ma ọ bụ tinye ya na ntinye ọkụ so. Ọbụna anyị zụtara wiil ka anyị wee nwee ike ịtụgharị ha gburugburu ọfịs ahụ ọ dị mkpa.
Ọkụ ndị a na-enye ike imezi ọnọdụ agba dị iche iche. Otu n'ime mmejọ ọtụtụ ndị na-ese vidio ọhụrụ na-eme bụ na ha na-agwakọta ụcha ọkụ. Ọ bụrụ n ’ịnọ n’ime ime ụlọ enwu gbaa, inwere ike ịkwụsị ọkụ ọ bụla n’ime ya iji zere ọgbụgba ọkụ nke agba. Anyị debere ìsì anyị, gbanyụọ ọkụ ọkụ, ma tinye ọkụ ọkụ anyị na 5600K iji nye ọnọdụ dị jụụ.
Anyị ga-etinyekwa ihe ọkụkụ ihe nkiri vidiyo dị nro dị n'elu tebụl pọdkastị anyị ka anyị nwee ike ịme ihe ngosi nke pọdkastị anyị site na Facebook Live na Youtube Live. Ọ bụ ntakịrị ọrụ iwu ụlọ dịka anyị ga-ewu ụlọ nkwado.
Aputure Amaran Ikanam ọkụ Ngwa ntu oyi Diffuser
Ngosipụta: Anyị na-eji njikọ njikọta nke Amazon na post a.
Tags: 3-isi ọkụ5600kapperengwa ngwaazụ azụkacha mma ọkụ kitjupụta ọkụọkụ ntutuọkụkickerkicker ìhèagba ajaìhè ngosiputaechiche tioriọkụihe ọkụọkụmonolightngosiputaswitcher studiovideo ọkụvidiyo ọkụ vidiyovideo ọkụ